I-CBD FAQ NGOMBOMBI OBOMVU | Ivenkile ye-intanethi ye-CBD
I-CBD FAQ NGOMBOMBI OBOMVU | ISICOMBULULO SEZEMPILO ESIPHAKAMILEYO NGO-2020
IINKCUKACHA ZE-CBD NEMIBUZO NGE-RED EMPEROR CBD
Yintoni i-cannabidiol (CBD)?
I-Cannabidiol okanye i-CBD yinto eyenzeka ngokwemvelo kwi-cannabinoid kwaye yenye yezona ndawo zininzi zesityalo se-hemp. I-CBD ikhuselekile ukuba ingasetyenziswa kwaye ayisebenzi. Kudala kunconywa ngeziphumo zempilo eziluncedo ngaphandle kwemiphumo emibi yamayeza aqhelekileyo amiselweyo.
Ngaba inkampani yakho yesithathu ivavanya iimveliso zakho kumgangatho nokhuseleko?
Ewe. I-Red Emperor CBD iyazingca ngokuba nenqanaba eliphezulu ngokubhekisele kubunyulu, amandla, kunye nomgangatho weemveliso zayo. Umlawuli obomvu we-CBD ngumntu wesithathu kuvavanyelwe iprofayili yeCannabinoid, ukuvavanywa kwePesticide, ukuhlolwa kweMicrobiological, kunye noHlahlelo lweTerpenes
Ivelaphi ioyile yakho ye-CBD?
Ioyile yethu ye-CBD yenziwe ngemigangatho ye-Organic esemgangathweni ye-hemp ekhuliswe eCalifornia kwaye ayi-100% isimahla kuyo nayiphi na into eyenziweyo okanye eyenziweyo. I-oyile ye-hemp evela kwi-hemp ye-mveliso okwangoku isemthethweni ukuhambisa ngaphakathi e-United States.
Ngaba iimveliso zakho ze-CBD ziya kundenza ndizive ndiphakamile?
Hayi ngekhe ube namava "aphezulu" xa ufunxa iimveliso zeoyile ze-CBD. Ioyile ye-CBD esetyenziswa kwi-Red Emperor CBD ivela kwizityalo ze-hemp, ngenxa yoko ayizukukunika ukuphakama okufanayo kwezithako ze-THC.
Ngaba iimveliso zakho ze-CBD ziya kundenza ndiphumelele kuvavanyo lweziyobisi?
I-CBD ithathwa njengengafumanekiyo kumathe okanye ekuhlolweni komchamo. Zonke Umlawuli obomvu we-CBD iimveliso zivela kwizityalo ze-hemp kwaye ziyahambelana nemigaqo esebenzayo ngokubhekisele kumxholo we-tetrahydrocannabinol (THC).
Funda ngakumbi kwi-CBD kunye novavanyo lweziyobisi.
Ngaba kukho naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ezimbi?
Iimveliso ze-Red Emperor ze-CBD zikhuselekile, azisebenzi ngokwasemphefumlweni, kwaye azinaziphumo zibi.
Yintoni i-CO2 extraction?
Umlawuli obomvu we-CBD usebenzisa inkqubo ye-CO2 engenakhemikhali esebenzisa uxinzelelo lwekhabhon diokside ukutsala ii-phytochemicals (ezinje nge-CBD kunye nezinye ii-cannabinoids) kwisityalo. Le nkqubo ayiqulathanga naziphi na izinyibilikisi ezichasayo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukukhupha ioyile ye-CBD. Ukukhutshwa kwe-CO2 kulunge kwindalo kwaye akunetyhefu. Nangona ithathwa njengeyona ndlela ibiza kakhulu yokutsala izityalo emhlabeni, ikwajongwa njengeyona ikhuselekileyo.
Ndiyithatha njani i-CBD kwaye yeyiphi idosi?
Ngaphambi kokongeza ioyile ye-CBD kwirejimeni yakho, njengayo nayiphi na into eyongezelelekileyo, qiniseka ukuba ujongana nogqirha wakho ukuze uqiniseke ukuba le nto yinto elungileyo kuwe. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba uthatha amayeza okuthintela ukuhlutha. Ioyile ye-CBD inokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo: tinctures, capsules, vaping oil, sublingual, or even topicals. Xa uthatha i-CBD, soloko ulandela imiyalelo kwiphakheji yemveliso oyithengileyo.
Nguwuphi umahluko phakathi kweSpectrum epheleleyo, iSpectrum ebanzi, kunye neeMveliso zeZC ze-CBD?
Ngaba unikezela ngomgaqo-nkqubo wokubuyisa?
Ewe. Ukoneliseka kwakho yeyona nto iphambili kuthi, yiyo loo nto iodolo yakho ixhaswa sisiqinisekiso sokubuyisa imali seentsuku ezingama-90.
Ngaba ungazithumela iimveliso ze-Red Emperor CBD kuwo onke amazwe?
Singathumela iimveliso ze-Red Emperor CBD kuwo onke amazwe ase-US, ngaphandle kwe-Kansas (KS), i-Arkansas (AR), ne-Louisiana (LA). Okwangoku asinakuthumela kwamanye amazwe.